Filazana · Jona, 2019 · Global Voices teny Malagasy
Filazana · Jona, 2019
Tantara mikasika ny Filazana tamin'ny Jona, 2019
Mediam-bahoaka 28 Jona 2019
Manomana andiana tobim-bilaogy manerana an'i Abidjan ny iray amin'ny mpitaridalana ny bilaogeran'i Afrika miteny frantsay hampiroboroboana ny fandraisana anjara mahaolona ao Cote d'Ivoire.
Tetikasa Vaovao An'ny Rising Voices
Hafanam-po 22 Jona 2019
Mahafaly anay ny milaza ny fanombohana hetsika santatra iray vaovao momba ny fiofanana ho mpisolovava nomerika
Sekoly Serba momba ny asa fanaovan-gazety antserasera
Mediam-bahoaka 18 Jona 2019
Natsangan'ilay Serba bilaogera menavazana sady mpankafy mediam-bahoaka, Ljubisa Bojic tao Belgrade, manangona ireo manam-pahaizana momba ny mediam-baovao ao an-toerana tahaka an'i Danica Radovanovic sy Lidija Kujundzic ny Sekoly Serba momba ny Asa Fanaovan-gazety Antserasera mba hampianatra ireo fototry ny fampitam-baovaon'olon-tsotra amin'ireo mpanao gazety nentim-paharazana sy ny Serba sarambabem-bahoaka.
Nazra – Tetikasa Firesahana ireo lohahevitra fady
Mediam-bahoaka 17 Jona 2019
Matetika lohahevitra voaràra any Egypta ny lohahevitra momba ny fitoviana eo amin'ny lahy sy ny vavy, ny fahasamihafana ara-pananahana, ny fifandraisana sahaza eo amin'ny lahy sy vavy ary ireo lohahevitra mifandraika amin'izany. Maro ireo mihevitra fa tokony resahana amin'ny mangingina ireo lohahevitra ireo, raha tsy izany tsy resahana mihitsy.
Blaogy tantaran'i Mokattam
Tamin'ny taona 1992, nisy horohoron-tany mahery vaika namely ny tanànan'i Kairo, ka 370 no namoy ny ainy, betsaka ny maratra, ary mbola marobe ihany koa no nafindra toerana. Mponina an'arivony no nalaina sy nanomboka nipetraka tamin'ny faritra iray ao amin'ny manodidina an'i Masaken Alzelzal - Alhadba Alwosta eo akaikin'ny tendrombohitra Mokattam malaza.
Ho tehirizin'ny tranombokin'ny Kongresy Amerikana ny tantaran'ny Global Voices
Mediam-bahoaka 15 Jona 2019
"Heverinay fa anisan'ny manan-danja amin'ity angondrakitra ity sy ny fandraketana ny tantara ny tranonkalanareo."
Mediam-bahoaka 13 Jona 2019
Iran Inside Out no tetikasa voalohany natokana hampiroboroboana ny fampandrosoana sy ny fizaràna horonantsary sy lahatsary antserasera ao Iran. Niara-niasa tamin'ireo klioban'ny horonantsari-mihetsika ao Tehran ny mpitarika ny tetikasa, Shaghayegh Azimi mba hamantatra ireo tanora mpamokatra sarimihetsika ka handrisika sy hanohana azy ireo hamokatra horonantsary sy hamoaka azy ireo antserasera.
Zavatra tena iainana amin'ny vanim-potoana nomerika
Manondro ny tenany ho "toeram-pizahantany manaraka" any Shina ny tanànan'i Shenyang, renivohitry ny faritany Liaoning. Saingy raha mitsidika ireo pagôdy fahiny ao amin'ny Tanàna Fahiny na ny "Faritra Fampandrosoana ny Indostrian'ny Teknolojia Avo Lenta" ianao, dia tsy holazain'ny takelaka ho an'ny mpizahatany mihitsy ireo mpivaro-tena lehilahy sy vehivavy izay avy amin'ny vondrom-piarahamonina ambanivohitra.
Mandrava ny fahanginana ao Kwa Mashu
Ao amin'ny tanànan'i Kwa Mashu, any ambanivohitr'i Durban, Afrika Atsimo, mampiasa ny laboratoarany Ekhaya Imagination Lab ny Tetikasa Fampandrosoana ny Fiarahamonina Kwa Mashu (K-CAP) mba hampiofanana ireo olon-tsotra tia mampita vaovao 20 avy ao an-tanàna
Eo andrefan'i Côte d'Ivoire ihany no misy an'i Liberia, izay manana mponina eo amin'ny 3,5 tapitrisa eo ho eo. Nonenan'ireo andevo afaka avy any Etazonia tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-19, tafiditra tao anatin'ny ady an-trano sy korontana naharitra 14 taona i Liberia izay nifarana tamin'ny faran'ny taona 2003 tamin'ny fahatongavan'ny CEDEAO sy ny Firenena Mikambana.